एक साइट स्क्रैपर सेवा Semalt द्वारा व्याख्या
ए साइट स्क्रैप आर एक प्रकार को प्रोग्राम हो जसको प्राथमिक प्रकार्य एक बाह्य वेबसाइटबाट सामग्री प्रतिलिपि गर्न र यसलाई प्रयोग गर्न. साइट स्क्रेटरहरू अनिवार्य रूपमा वेब क्रेलरहरूको रूपमा एउटै कार्यहरू छन्. यी दुवै कार्यक्रमहरू सूचकांक वेबसाइटहरूमा काम गर्दछ. तर, यो महत्त्वपूर्ण छ कि वेब क्रलरहरू सम्पूर्ण वेब लुकाउनका लागि जिम्मेवार छन्, तर साइट स्क्रैपरको मुख्य उद्देश्य प्रयोगकर्ता-निर्दिष्ट वेबसाइटहरू लक्षित गर्ने हो।.
कार्यक्रम प्रयोजन राजस्व उत्पन्न गर्न को लागी प्राथमिक उद्देश्य संग अन्य प्रयोगकर्ताबाट सामग्री दर्पण गर्न को लागी, प्राय: प्रयोगकर्ता डेटा र विज्ञापन बेच्न को लागी।. यद्यपि, यो आवश्यक छ कि स्क्रैपिंग सेवा प्रदायक लक्षित प्रयोगकर्ता वेबसाइट को लागी एक निगरानी सेवा सेट गर्दछ र सुनिश्चित गर्नुहोस कि स्क्रैपिंग सेट को सदैव रखरखाव को तहत.
एक्सएमएल, सीएसवी, एचटीएमएल (1 9)
साइट स्क्रेटरहरूले पनि सम्पूर्ण वेबसाइटहरूबाट पनि कुनैपनि प्रकारको डेटा डाउनलोड गर्न सक्दछन्।. यो क्षमता ठूलो मात्रामा प्रयोगकर्ता निर्दिष्टीकरण र कार्यक्रममा निर्भर गर्दछ. डाउनलोड पछि, सफ्टवेयर पछि थप डाउनलोडको लागि अर्को बाह्य सामग्रीको लिङ्कहरू पछ्याउँछ. सफ्टवेयर डाउनलोड गरिएका फाइल प्रकारहरू फरक ढाँचाहरूमा HTML, CSV वा XML फाइलहरू बचत गर्न सक्दछ. सबैभन्दा लोकप्रिय साइट स्क्रैपरले प्रयोगकर्तालाई उपयुक्त डेटाबेसमा फाइलहरू निर्यात गर्न सक्षम पार्न थप क्षमता छ.
सामग्री स्क्रैपिंग (1 9)
यो मौलिक सामग्री चोरीको एक ज्ञात वा वैध वेबसाइट बाट एकै प्रकारको सामग्री पोष्ट गर्न को लागी एक गैरकानूनी प्रविधी हो जुन सामग्रीको मालिकले सम्बन्धित अनुमति प्राप्त गर्न बिना. एकमात्र इरादा मालिकले यसलाई विशेषताको विफलताको साथ चोरी सामग्रीलाई मूल सामग्रीको रूपमा पारित गरिरहेको छ.
साइट स्क्रैपिंग धेरै कार्यहरू छन्; सबैभन्दा धेरै सामान्य साहित्यिक र डेटा चोरी हो. साथै, यो प्रयोगकर्ताहरूलाई अन्य वेबसाइटहरूबाट स्क्रैप गरिएको डाटा समावेश गर्न सुविधा दिन्छ. एक वेबसाइट जो अन्य वेबसाइटहरु बाट स्क्रैप गरिएको सामाग्री को बनेको छ स्क्रैपर साइट .
संसारभरि धेरै स्क्रैप साइटहरू होस्ट गरिएका छन्. अतीतमा, केहि स्क्रैप साइटहरु लाई कुनै पनि प्रतिलिपि अधिकार सामाग्री को खींचने को लागि भनिएको छ, तर उनलाई खींचने को बजाय, उनि सिर्फ गायब हो या डोमेनहरु लाई स्विच.
साइट स्क्रैपर्स (1 9)
विश्व वाइड वेब सधैँ यसको गुणस्तर र डेटा आकार बढ्दै जान्छ, जुन डेटा उत्साही को लागी आवश्यकता को लागी निकासी को वैकल्पिक प्लेटफार्महरु को लागी वेब बाट डेटा. टेक्निकलले प्रगतिले रुचाइएको वेबसाइटबाट डेटा प्राप्त गर्न विभिन्न प्रकारका साइट स्क्रैपर्सहरूको विकासलाई सहयोग पुर्याएको छ.
त्यहाँ विभिन्न साइट स्क्रैपर्सहरू छन् जुन नेटमा अवस्थित छन्. केहि उत्तम साइट स्क्रैपर्स जो आज बजार मा सजिलै संग उपलब्ध छ Wget, Scraper, Web Content Extractor, Scrape Goat, Web Scraper Chrome extension, Spinn3r, ParseHub, Fminer, etc.
तथापि, त्यहाँ अन्य तरिकाहरू छन् साइट स्क्रैपिंग . तिनीहरू खोज इन्जिनहरू सिर्जना गर्दै र एसपीपीएसमा स्निपेटहरू प्रदर्शन गर्दै, एक पृष्ठबाट एक पृष्ठको पेजमा समातेर र यसलाई पुनःप्राप्त गर्न व्यक्तिगतकृत वेब डाइरेक्टरी सिर्जना गर्न, एक वेबसाइटबाट स्टक प्रक्रिया प्राप्त गर्न र अर्कोमा समान Source .